Unformat Hard Drive - Sida loo unformat drive adag on Windows / Mac
Sida loo Unformat A Hard Drive on Windows ama Mac
Maxaa habboon in aan sameeyo ka dib markii ugu horeysay formatting drive adag?
Sida loo unformat drive adag?
Video tutorial ah drive unformat adag
1 Maxaa habboon in aan sameeyo ka dib markii ugu horeysay formatting drive adag?
Formatted wadid aad u adag si qalad ah, oo dib ma ilaa xogta lagu kaydiyaa muhiim ku yaal? Warka wanaagsani waa in aad weli fursad ay ku unformat drive adag . Xusuusnow, si degdeg ah aad unformat drive adag, fursad dheeraad ah oo aad leedahay doonaa inuu ka soo kabsado xogta aad. Sidoo kale, ka dib markii formatting drive ay ku adag tahay, waa in aad sii waxyaalaha soo socda in aad maskaxdaada:
>> Ha Barzakh drive adag
>> Ha ku qorin wixii xog ah u galay
>> Ha rakibi nidaamka qalliinka ama barnaamij kasta oo ku yaal
>> Ha mar kale qaab
>> Ha isku dayin wax unformat untrusted software in ay
Si kale haddii loo dhigo, ma si fudud isku dayaan in ay sameeyaan wax kasta oo ay u drive adag, taasina waa arrin aad u muhiim ah. Marka drive adag waxaa formatted, ma waxaad ka heli kartaa wixii macluumaad ah ee ku yaal. Taasi waa run, laakiin kaliya in ay indhahaaga. Dhab ahaantii xogta aan run ahaantii si degdeg ah tirtirayaa ka mid ah drive ka. Oo haddana waxay weliba sii joogo meel, oo ku saabsan xaalada aan muuqan. Taasi waa sababta oo ah meel ay ka qaadaan xogta formatted waxa lagu calaamadiyaa sida loo heli karo in isticmaalin. Marka aad ku qorto xogta cusub ee, waxay degi doono meel bannaan oo dib u isticmaal. Markaas xogta formatted waa run ahaantii si joogto ah oo ka bariyeelay, oo ma waxaad ka heli kartaa dib sinaba. Sidaas darteed, si fiican ilaalinta drive formatted adag waa mid aad u muhiim ah, taas oo go'aan ka gaari kara haddii aad karto unformat drive adag ama aan.
2 Sidee loo unformat drive adag?
Inta aad si fiican u ilaaliyaan drive adag aad formatted, waa sahal in unformat wadid aad u adag oo aad u hesho xogta muhiimka ah dib. Si aad u hesho xirfad iyo aamin software unformat drive adag, waxaad u baahan tahay inaad akhriso hagahaan oo ah helaan website-ka si taxadar leh. Halkan waxaan u Khushuucdo Dartiis aad ku talin Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac haddii aad isticmaalayso Mac OS X. Labada iyaga ka mid ah waa 100% damaanad qaaday ammaan, iyo mid aad u fudud in ay ku shaqeeyaan, gaar ahaan weyn bilowga ah.
Waxaad isku dayi kartaa version maxkamad free hoose si scan drive adag aad formatted iyo hubiyo xogta lumay ka hor inta aanad bixin. Ha dejisan oo ku xidh on drive adag meesha aad xogta aad badiyay, ama xogta la overwritten doonaa.
Dooro xaq u version, download oo ku xidh on your computer. Markaasaa waxaa u abuurtaan. Next, aynu isku dayi ah barnaamijka drive adag unformat in Windows wada.
Step1 Dooro habka soo kabasho
Marka aan bilowno barnaamijka, waxaa jira laba hababka soo kabashada aad dooratay, iyo Wizard iyo Standard Mode ah. Labada iyaga oo isla dhaqmaan.
Step2 Dooro nooca file u soo kabashada
Aynu qaadan Wizard ah in la sii wado, oo halkan aad si ay u doortaan nooca file in aad qorsheyneyso inay ka soo kabsadaan drive adag ah. Haddii aad rabto in aad soo kabsado dhammaan faylasha, waxaad dooran kartaa "Dhammaan files".
Step3 Dooro goobta file u soo kabashada
Ka dib markii nooca xaqiijiyay faylka, waxaad u baahan tahay in la qeexo goobta baaritaan. Haddii ay drive your computer ee adag formatted, waxaad u baahan tahay in Saliibiyiinta computer oo dhan. Haddii ay ah drive dibadda u adag, waxaad u baahan tahay in ay doortaan "qalabka saari Dibadda" in unformat aad drive dibadda adag . Dabcan, hadii kaliya ah xijaab waxaa formatted, aad u cayimi kartaa ay "In goob cayiman ah." Dabadeedna ay u diyaarin si scan.
Step4 bilow in iskaan
Ka hor inta in laga baarayo, fadlan calaamadee sanduuqa ka hor "Enable Deep Scan", kaas oo kaa caawin doona in ay unformat drive adag dheeraad ah oo ammaan ah. Markaas ka dhacay on the "Start".
Step5 kulanka xiisaha leh oo soo kabsado
Skaanka qoto dheer oo aad qaadan doontaa waqti yara dheer ah, oo waxaad heli kartaa koob bun ah inta lagu jiro waqtiga. Scan ka dib, dhammaan xogta recoverable waxaa lagu ogaaday oo ku qoran qaybaha. Waxaad iyaga ku hubin kartaa mid mid dooro kuwa aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado.
Waxa aad u sii waa in ay maanka waa in: Ha badbaadin xogta soo kabsaday on drive isla adag inaad halkaas iyaga ka formatted, u condiseration ammaanka. haddii aad ogaato in qaar ka mid ah files muhiim ah la la'yahay, waxaad isticmaali kartaa dib u soo kabashada file cayriin in ay mar kale laga baarayo si aad uga hesho.
Inta lagu guda jiro iskaanka ah, aad puase karo ama la joojiyo marka aad u baahan tahay inaad ka baxo ama u wax ka qaban kale, oo ay sii wadi doonaan. Marka la joojiyo iskaanka ah, waxaad badbaadin kartaa natiijada la marsiiyey oo dajiyaan waqtiga soo socda in la sii wado. Laakiin ma badbaadin on drive il adag si looga fogaado overwriting xogta.
3 Video tutorial ah drive unformat adag
> Resource > Hard Drive > Sida loo Unformat A Hard Drive ee Windows ama Mac